चर्चित पोर्न स्टार बिन्दु परियारोको दुखको कहानी,कसरी भइन् पहिलेकि रातो टोपि लाउने फुच्चि नानि अहिलेकि बिन्दु परियार
प्रकासित मिति : १७ भाद्र २०७५, आईतवार प्रकासित समय : २०:२३
म बिन्दु परियार अहिले निकै चर्चाको बिषयमा छु भन्दा केहि फरक नपर्ला । अहिले सम्म मिडियामा जे जस्तो मेरो बारेमा कुरा आए पनि मलाइ त्यसको मतलब छैन । हुन पनि मैले यहाँ अमेरिकामा गरेको काम नेपालि सोसाइटिमा नपच्ला र पच्दैन पनि ।
अब चर्चाकै चासो र मानिसहरुका खुल्दुलिका लागि यो म्यासेज दिन जरुरि ठान्दछु । पढ्ने बुझ्ने यदि नेपालमा जन्मेका छौ र आमाको दुध पिएका छौ भने यो कुरा अवस्य बुझ्ने छौ । मेरो अमेरिकाबाट सबै जनालाई अब आउने दशै र तिहार को शुभकामना । (नोट: गतवर्ष तिहारलाइ लक्षित गरेर लेखिएको पोस्ट हो)
म धौलागिरि बोर्डइङ स्कुल बाट S.L.C र ज्ञानुबाबा बाट १२ क्लस उतृण गरि अहिले अमेरिका छु । हो मिडियामा आएको केहि कुरा ठिक पनि छ तर सबै हैन । हेमजा मेरो घर हो ।
बिष्णु पादुका स्कुल मेरो जिवनको दोस्रो स्कुल हो । पोखराको राम बाराहि स्कुल बाट बिष्णु पादुकामा गए , त्यहाँ मैले ३ क्लस पास गरेपछि मेरो सानु बाउ, जुन आहिले मेरो श्रीमान भनेर चर्चामा छन तेसैले मलाई धौलागिरि बोर्डइङ स्कुलमा पढएको हो ।
मैले १२ पास गरे पनि मलाइ मिडिया ले S.L.C समेत उतिर्ण नगरेको भन्दा हासो लाग्यो र कता कता रिस पनि, नेपालमा मैले जस्तो लुगा लगएर हिडेपनि, मलाई नराम्रो नजरले हेरे पनि मेरो घर मा आएको मानिसहरुले मलाई म कस्तो खाले केटि हो भन्ने भुझेको छ । मेरो बारेमा मिडियामा आएको कुरा सबै ठीक हैन । हो अमेरिकामा मैले Strip क्लब मा काम गरेको हो र बैश हुने बेला सम्म गर्छु । यो डान्स नेपालमा सायद कुनै जिवनमा पनि गर्न नसकिएला र गर्न पनि नपरोस । हो मैले सेक्स पनि गरेको हो जुन अमेरिका मा लिगल छ यो कुरा नेपालमा सबैलाई थाहा छ । म कुनै नेता वा मन्त्रि होइन भाषण दिनलाइ र दिन पनि चाहन्न ।
अब कुरा गरौ म अमेरिका कसरि आए भन्नु पर्दा मेरो भाग्य नै होला । मान्छे अमेरिका आउन मात्रै पाए भन्ने कतिले सोच्छन यो कुराम म १००% छु । कुरा के हो भन्दा म यहाँ झुठो आश्वसनमा आए । मेरो सानो बाउ भन्ने मान्छे मेरो सानि आमाको एक्स(ex) बुढो हो । सानि आमासँग ११ वर्ष बसेपछि मेरो दिदि पर्ने सिता परियारलाई ल्यायो !
त्यो बेला दिदी जम्मा १७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । लगेर यहाँ Tom Sewell ले दिदिलाई क्लब मा नचाउन पुरायो । हामी नेपालीलाई त के थाहा हुन्छ र नेपाल मा त छैन Strip क्लब । हुन त आजभोलि बार मा डान्स गरेर आफ्नो जिवन चलाउने दिदिबहिनिहरुलाई त भालु, रन्डि भन्छन भने म त यस्तो क्लब मा काम गरे जहाँ डान्स मात्र नभएर आफुले लगाएको कपडा पनि खोल्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
कारण थियो तेही
मेरो १२ सम्म पढाउने खर्च त्यसले नै दिएको थियो जुन मेरो लागि राम्रो थियो । अमेरिका आएर राम्रो लाईफ बनाउने कस्को इच्छा हुँदैन र ? त्यसैले मलाई यहाँ ल्याइयो । आएपछि मैले यहाँ स्कुल गए र पास गरे जुन नेपालको +२ जस्तै हो । नर्सिङ पढ्ने इच्छा थियो नेपालमा र त्यहाँ पनि त्यो पुरा हुन सकेन ।Tom ले नै यहाँ अमेरिका मा पढ्औछु भनेर Strip क्लब मा नचाउन बाध्य बनाको हो ।
त्यो क्लब मा काम गर्नु यहाँ ठुलो कुरा हैन तर काम सजिलो छैन । हो यदि राम्रो शरिर र जवनि छ, बोल्न जान्ने छ भने २-४ महिनामा नै करोडपति भाइन्छ ।Tom ले मलाइ अमेरिका आउँदा लागेको खर्च र नेपाल मा हुँदा पढ्आएको खर्छ समेत गरेर ५०,००० । (पचास हजार्) U.S डल्लर माग्यो र नदिए ज्यान मार्ने धम्कि समेत दियो । क्लब मा काम गर्दै जादा मैले कमाएको पैसा त्यसले खोस्न थाल्यो ।